Sajhasabal.com | Home२०२२ मा कुन कुन फोन आउँदैछन् ? एप्पल आईफोन एसई थ्री किन ढिलो ?
२०२२ मा कुन कुन फोन आउँदैछन् ? एप्पल आईफोन एसई थ्री किन ढिलो ?
पुस ९, काठमाडौँ | हामी २०२१ को अन्तिमतिर छौं । यो वर्ष स्मार्टफोनको बजार सामान्य नै रह्यो । केही फोन लोकप्रिय भए । केहीले अपेक्षा गरेअनुसार स्थान जमाउन सकेनन् । त्यस्तै बजारमा चिप अभावका कारण केही फोनको उत्पादनमा असर पर्‍यो ।
अब मोबाइल निर्माताकाे ध्यान नयाँ वर्ष २०२२ तिर माेडिएकाे छ । २०२२ मा नयाँ फोन किन्न चाहनेका लागि उनीहरुले के ल्याउँदैछन् त ? आजको लेखमा पाँच चर्चामा रहेका पाँच फोनको चर्चा गर्दैछौं, जुन सन् २०२२ मा सार्वजनिक हुनेछन् ।
एप्पल आईफोन एसई थ्री
सन् २०१६ मा पहिलो सिरिज सार्वजनिक भएको आईफोनको सस्तो फोन ‘आईफोन एसई’ को तेस्रो जेनेरेशन २०२२ मा सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । यो फोन २०२२ को सुरुवातमा नै सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।
यो फोनले फाइभजी सपोर्ट गर्ने र आईफोन १३ मा प्रयोग भएको ए१५ बायोनिक चिप प्रयोग हुने अनुमान छ । हालसम्म बाहिरिएकाे विवरणअनुसार ‘एसई थ्री’ मोडलको डिजाइनमा खासै ठूलो परिवर्तन हुनेछैन ।
आईफोन एसईको तेस्रो जेनेरेसन पनि ४.७ इन्च स्क्रिनमा आधारित हुने धेरैको अनुमान छ ।
आईफोन १४ म्याक्स
एउटा मोडेलको फोन सार्वजनिक गरेको केहि समय नबित्दै अर्को फोन सार्वजनिक गर्नु एप्पलको लागि अब सामान्य भइसकेको छ । आईफोन १३ सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि नै आईफोन १४ को चर्चा सुरु भइसकेको थियो ।
यसैबीच एप्पलले आफ्नो सुपर साइज भर्सनको स्मार्टफोन ‘आईफोन १४ म्याक्स’ २०२० मा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
आउने वर्षदेखि एप्पलले आईफोन मिनी भर्सनको उत्पादन रोकेर ६.७ इन्चको स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको अर्थ हो, आईफोन १४ को सिरिजमा हुने फोनमा ६.१ इन्च र ६.७ इन्चको डिस्प्ले हुने अनुमान गरिएको छ ।
आईफोन १४ म्याक्स ठूलो स्क्रिन मनपराउने प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी हुने अनुमान गरिएको छ । याे फोनमा ४८ मेगापिक्सेलको वाइड रियर क्यामेरा हुने बताइएको छ ।